စက် Spinning ချည်မျှင်ေူပာင်းလဲရေးကိုပြီးတော့အဆင့်မြှင့်သည်တစ်ဦးအရေးကြီးထောက်ပံ့ Is - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
စက် Spinning ချည်မျှင်ေူပာင်းလဲရေးကိုပြီးတော့အဆင့်မြှင့်သည်တစ်ဦးအရေးကြီးထောက်ပံ့ Is
အချိန်: 2019-07-08 hits:
မနေ့က, သင့်နိုင်ငံတကာချည်မျှင်ထုတ်လုပ်သူများဖက်ဒရေးရှင်း (လျှော့အဖြစ်ရည်ညွှန်း: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Fanglian) နှင့်ဂျာမန်ချည်မျှင်စက်အစည်းအရုံးကိုဖိတျချေါ, ဂျာမနီနှင့်စပိန်မှ Sun က Ruizhe \_ 's အလည်အပတ်ခရီးတရုတ်အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့သမ္မတ, နိုင်ငံတကာဆက်စပ်အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းအလုပ်ရုံသို့တက်ရောက်, ဂျာမန် Frankfurt နည်းပညာ•အထည်အလိပ်နှင့် nonwovens ပြပွဲသို့သွားရောက်, နှင့်ဒေသခံသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများသွားရောက်ကြည့်ရှု, နှင့်အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းအမှတ်တံဆိပ်အဝတ်အစားလုပ်ငန်းများ. တရုတ်အထည်အလိပ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, Xu Yingxin, Chen က Dapeng, လီ Lingshen, သေးငယ်တဲ့တန်းတူရေးနှင့်အဆုံး, အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခရီးစဉ်လိုက်ပါသွား.
နိုင်ငံတကာအထည်အလိပ်ပြည်ထောင်စုအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်စာတမ်းဖတ်ပွဲ (ISU) နိုင်ငံတကာအထည်အလိပ်ပြISU်ထောင်စုရိုးရာစာတမ်းဖတ်ပွဲဖြစ်ပါသည် (ISU), ဆွစ်ဇာလန်၏ချည်မျှင်စက် Association ကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်, ဂျာမနီနဲ့အီတလီနိုင်ငံနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း. ချည်ငင်၏နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကမ္ဘာ၏ကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စားလှယ်များ \_ 's အဓိကအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ status များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ် In-depth ဖလှယ်မှုလုပ်ဆောင်သွားရန်ညီလာခံတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရ, အထူးသဖြင့်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်း. ဒီနှစ်မှာတော့ \_ 's အစည်းအဝေး Frankfurt ကျင်းပခဲ့သည်, မေလ 8 ခုနှစ်တွင်ဂျာမနီ, နှင့် 152 နီးပါးကနေစက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ 20 ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံပေါင်းနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည်.
နေရောင် Ruizhe, တရုတ်အထည်အလိပ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့်နိုင်ငံတကာချည်မျှင်အဖွဲ့ချုပ်မှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦး၏သမ္မတဦးသိန်းစိန်, တရုတ် \_ 's အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းပစ္စုပ္ပန်အခြေအနေနှင့်အနာဂတ်ရှင်းပြဖို့အစည်းအဝေးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြား.
နေရောင် Ruizhe တရုတ် \_ 's အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း key ကိုအသွင်ပြောင်း၏ node ကိုနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်ကြောင်းထောက်ပြ. တရုတ် \_ 's အထည်အလိပ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးနေသည်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်နေသည်, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တရားနှင့်အညီဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်, တရုတ် \_ 's အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်၏နက်ရှိုင်းထင်ဟပ်ထားတဲ့. အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားတရုတ် \_ 's အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့ထောက်ခံမှုဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါအထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်, တစ်တရုတ် Sun က Ruizhe စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်သုညပေါင်းလဒ်ဂိမ်းမဟုတ်ကြောင်းထောက်ပြ, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်၏အရေးပါသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်, စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသစ်တစ်ခု concept ကိုတည်ထောင်ရန်: ယှဉ်ပြိုင်မှုကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှာ, တစ်ခုတည်းကနေအများအပြားဂေဟစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမှ, အတင်းအကျပ်လိုက်လျောညီထွေကနေတက်ကြွစွာဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှ, အလေးပေးထံမှအကျိုးစီးပွားတိမ်းညွတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနေတာဝန်များ၏ခွဲဝေမှုဖို့အာရုံကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်. အောက်ပါလေးရှုထောင့်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့တရုတ်အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်: တဦးတည်းငွေရတတ်သောသူစက်မှုဇုန်ထောက်ပံ့ရေးဖြစ်ပါသည်, ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ရန်, စျေးကွက်, မြို့တော်, ကွန်ယက်ကို, စမှတ်အဖြစ်နည်းပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု, ထိရောက်သောနှင့်ကွဲပြားခြားနားစက်မှုလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ရေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်း; နှစ်ခုအတွက်ထောက်ပံ့မှုစနစ်တိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်, စက်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်, စက်မှုဇုန်တည်ဆောက်ပုံ၏အဆင့်မြှင့်တင်, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံ, စက်မှုဇုန်ထိရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်စက်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုလှုပ်ရှားမှုလွှတ်ပေးရန်; သုံးယောက်အသိဉာဏ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏မြှင့်တင်ရေးပိုမိုနက်ရှိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်, ၏အကောင်အထည်ဖော်မှု "တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု 2025", အဆိုပါဘက်ပေါင်းစုံစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ်အတွက်လျှောက်လွှာများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများမြှင့်တင်ရန်, နှင့်အကြွေးစနစ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဆောက်လုပ်ရေး, ပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များမြှင့်တင်ရန်, ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အသိဉာဏ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်က; လေးလူမှုရေးတာဝန်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်ပါတယ်, ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်, လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုမြှင့်တင်ရန်, အဆိုပါထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဆောက်လုပ်ရေးပိုကောင်းအောင်, အစိမ်းရောင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများ၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်, အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရောင်ထုတ်ကုန်, အစိမ်းရောင်စက်ရုံများဖန်တီး, အစိမ်းရောင်ဥယျာဉ်တည်ဆောက်, နှင့်အစိမ်းရောင်ထုတ်လုပ်ထောက်ခံမှု system ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်.
အစည်းအဝေးတွင်, အာဖရိကဝါဂွမ်းများနိုင်ငံတကာယူနီယံ၏ဥက္ကဋ္ဌဦး, ချည်ငင်နဲ့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသင်းအဖွဲ့သမ္မတ Bedi, အထည်အလိပ်ဖိုင်ဘာစက်မှုလုပ်ငန်းများနိုင်ငံတကာယူနီယံ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, တောင်ကိုရီးယားအဖွဲ့ချုပ်ကြီးထွားမည်ရိန်းအာဖရိက၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာအပေါ်ပြောဆိုရန်, တောင်ကိုရီးယား, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဘရာဇီး, ပါကစ္စတန်, တူရကီနှင့်ဥရောပအထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်း.
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, Murata စက်ပစ္စည်းမှကိုယ်စားလှယ်များ, ou Ruikang, Grosz, Sanderson Reggie, ထိုကဲ့သို့သောအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏စျေးကွက်စွမ်းဆောင်ရည်ဝေမျှဖို့အဖြစ် 2016, နှင့်အတွင်းအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစျေးကွက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လမ်းကြောင်းသစ် 2017 ခန့်မှန်းခဲ့သည်.
အဆိုပါကွန်ဖရလာမယ့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစာတမ်းဖတ်ပွဲဇူးရစ်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, ဧပြီလဆွစ်ဇာလန် 2018, နှင့်ဆွစ်ဇာလန်ချည်မျှင်စက် Association ကကျင်းပလိမ့်မည်.
နောက်တစ်ခု : Knititn စက် Fuction